तन्दुरुस्त शरीरका लागि बहुउपयोगी आँप «
तन्दुरुस्त शरीरका लागि बहुउपयोगी आँप
यो समय आँपको सिजन हो । फलफूलको राजा आँप बच्चादेखि बुढासम्मका व्यक्तिका लागि मनपर्ने फल हो । आँप स्वादमा मात्र होइन पोषक तत्वको भण्डार पनि हो । आँपको सेवनले धेरै प्रकारका रोगहरुबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
आँपले “ह्यापी हर्मोन” उत्पादन गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । बच्चाहरु पनि आँप निकै मन पराउँछन् । ८ महिनाभन्दा बढीका बालबच्चालाई आँप खुवाउन सकिन्छ । आँपले बच्चाहरुको मानसिक विकास गर्नुका साथै पाचन तन्त्र पनि ठिक गराउँछ भने यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ ।
१. रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
४. दिमाग र हड्डीको विकास